မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 10/01/2011 - 11/01/2011
Posted by mabaydar at 3:45 PM2comments :
American Idol runner-up David Archuleta တစ်ယောက် နောက်လထဲမှာ ဆန်တိုဇာ Resorts world မှာရှိတဲ့ Hard Rock hotel မှာ လာရောက်ဖျော်ဖြေမယ်လို့ သိရပါတယ်...
၂၀၀၈ ခုနှစ် အမေရိကန်အိုင်ဒိုးမှာ ဒုတိယနေရာနဲ့ နာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ အသံအားကောင်းကောင်း ကောင်လေးဟာ နိုဝင်ဘာ ၁၉ရက်နေ့မှာ Hotel ရဲ့ "The Coliseum" စင်မြင့်ပေါ်မှာ ဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်....
အမေရိကန် အိုင်ဒိုးပြိုင်ပွဲအပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ သူနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Crush သီချင်းဟာ ခွေပေါင်း ၂,၀၀၀,၀၀၀ (၂သန်း) နီးပါးရောင်းရခဲ့ပါတယ်...
၂၀၁၀ခုနှစ် သူ့နောက်ဆုံးထွက် စီးရီး "The Other Side of Down" မှာ သူ့ရဲ့ သီချင်းရေး အရေအချင်းကို စီးရီးတစ်ဝက်စာလောက် ပူးပေါင်းရေးပြီး ပြသခဲ့ပါတယ်...
ခု သူ့ရှိုးပွဲလက်မှတ် တန်ဖိုးတွေကတော့ ရိုးရိုးတန်း $၁၀၈ နဲ့ VIP $၁၄၈ (ပထမ အစောင် ၂၀၀ သာ၊ အနီးကပ် နှုတ်ဆက်ခွင့်ရမည်) တို့ဖြစ်ပါတယ်...
၀ယ်ယူချင်ရင်တော့ www.gatecrash.com.sg, TicketCube နဲ့ စကာင်္ပူစာတိုက်များ... SAM စက်များမှ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်... မနေ့က ဖေ့ဘွတ်မှာတွေ့တဲ့အထိတော့ VIP ticket အနည်းငယ်ကျန်သေးတယ်လို့တွေ့ပါတယ်...
ကဲ David Archuleta ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ မသိလိုက်ရ မရှိရလေအောင် ဒီကနေ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်...
Source from AsiaOne Sunday, Oct 23, 2011.
Posted by mabaydar at 10:07 AM3comments :
Labels: Celebrities , Star in town
Posted by mabaydar at 1:34 PM3comments :
"ဟာ... နေ့တိုင်း ထမင်းဗူးယူလာတယ်... ချွေတာလှချည်းလား..." အိမ်မှ အလုပ်ကို ထမင်းဗူးယူလေ့ရှိသော ကျွန်မကို အသိမြန်မာတစ်ယောက်ကကောက်ချက်ချ နှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်... ထိုသူကို ကျွန်မ အပြုံးတစ်ပွင့်သာပေးလိုက်သည်... ဘာမှဖြေရှင်းပြမနေချင်တော့ပါ... တချို့အရာများသည် ဖြေရှင်းပြနေစရာပင်မလိုတော့ပေ... လူတစ်ဦး၏ခံယူချက်ပေါ်တွင်သာ မူတည်ပေသည်...
အမှန်တော့ ထိုသူမမြင်လိုက်သည်မှာ ထမင်းဗူးထဲတွင် သေသပ်စွာထည့်ပေးထားသော ကျွန်မဖေဖေ၏ စေတနာနှင့် ထိုထမင်းဗူးကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ကျွန်မရရှိသော စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ပီတိ လုံခြုံမှုတို့ကို ထိုသူ မခံစားဖူးသောကြောင့် ထိုသို့ကောက်ချက်ချခြင်း သာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မယူဆလို့ရသည်... ကျွန်မသည် အိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်းကို ခုံမင်သူဖြစ်သည်... အပြင်စာကို ၁ပတ်လောက် ဆက်တိုက်စားနေရလျှင်ပင် နောက်နေ့ အဲဒိ food court တို့ hawker center တို့ကို အကြိမ်ကြိမ်ပတ်သော်လည်း စားချင်တာ ရှာမတွေ့တတ်သော သူဖြစ်သည်... အလွန်တရာမှ အစားဂျီးများသော ကျွန်မအတွက် အိမ်မှ ကျွန်မအကြိုက် မေမေစီစဉ်ကာ ဖေဖေ ချက်ပြုတ်ပေးတတ်သောအိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်းက အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်...
ထိုထမင်းဗူးကိုစားတိုင်း ကျွန်မဖေဖေ၏ ကျွန်မတို့ အပေါ်ထားသော မေတ္တာနှင့် စေတနာကို ခံစားလို့ရသည်...
ထိုထမင်းစားတိုင်း ကျွန်မတို့ မိသားစုဘ၀လေး မပြိုကွဲမပျက်စီးပဲ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းရှိအောင် စောင့်ရှောက်ဖန်တီးပေးခဲ့သော ဖေဖေ့ကို လေးစားသည်...
ထိုထမင်းစားတိုင်း ကျွန်မတို့ သားသမီးတွေနှင့် ခင်ခင်မင်မင် ပျော်ပျော်ပါးပါးနေတတ်ကာ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုလေးကို ထူထောင်ပေးခဲ့သော ဖေဖေ့ကို ကျေးဇူးတင်သည်...
ထိုထမင်းစားတိုင်း ကျွန်မတို့ငယ်စဉ်အခါမှ စ၍ ယခုအချိန်အထိ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်ကို ရရာနေရာကနေ အတတ်နိုင်ဆုံး ကျေပွန်အောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ ဖေဖေ့ကို အားကိုးသည်...
ထိုထမင်းဗူးသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မည်သူ့အတွက်မှ ပိုက်ဆံမည်မျှနှင့်မှ အဖိုးဖြတ်လို့မရပဲ ကျွန်မအတွက်သီးသန့်ဖြင့်သာ စီမံထားသော အထူးစပ္ပါယ်ရှယ် ထမင်းဗူးဖြစ်သည်...
အထူးသဖြင့် ထိုထမင်းဗူးကို စားတိုင်း ကျွန်မ၏ မိဘနှစ်ပါးလုံး ကျန်းကျန်းမာမာဖြင့် သက်ရှိထင်ရှား မိသားစု တသိုက်တ၀န်းထဲရှိနေတဲ့ အဖြစ်ကို သိရတိုင်း ကျွန်မစိတ်အေးရသည်...
ယခုအချိန်အထိ ကျွန်မဘာသာ မည်မျှပင် ရပ်တည်ရှာဖွေနိုင်ပါစေ ကျွန်မ မိဘများမရှိတော့လျှင်ဆိုသည့်အတွေးသည် ကျွန်မကို တစ်ထိုင်တည်း မျက်ရည်ကျ ချောက်ချားကာ အားအငယ်ဆုံးခံစားချက်ကို ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်... ကျွန်မ အကြောက်ဆုံးဖြစ်သည်...
ကျွန်မစာဖတ်ပျင်းသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ စာတွေ အနည်းနဲ့ အများရေးနိုင်နေခြင်းသည် ကျွန်မ ဖေဖေ ဖတ်သောစာများကို ပြန်လည် ဝေငှပြောပြတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်...
သူငယ်ချင်းများအလည်တွင် အရင်ခေတ်က သမိုင်းကြောင်းများ အထ္တုပတ္တိများနှင့် ပတ်သတ်၍ အသိရှိကာပြောနိုင်နေခြင်းမှာလဲ ဖေဖေစာဖတ်ကာ ပြန်ပြောပြလေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်...
မြန်မာပြည်အတွင်း နေရာဒေသတော်တော်များများနှင့် ပတ်သတ်၍ ခရီးသွားနှင့်ပတ်သတ်၍ ကျွန်မတွင် ဝေငှစရာများရှိနေခြင်းမှာလဲ ငယ်ငယ်ကတည်းက နေရာတော်တော်များများကို ဖေဖေနှင့်မေမေတို့ လိုက်ပို့ပေးခဲ့ကြ၍ဖြစ်သည်...
ကျွန်မ ရှေးသီချင်းတွေ (တွံတေးသိန်းတန်၊ ပြည်လှဖေ၊ မေရှင်၊ မမြရင်၊ သုမောင်၊ ကိုမြကြီး၊ စန္ဒရားချစ်ဆွေ၊ စသည်ဖြင့်)သီချင်းတွေကို ထန်ကတိုင်းကျကျ သီဆိုတတ်ခြင်းသည်လည်း ကျွန်မဖေဖေ၏ အလွန်အကျူး သီချင်းကြိုက်တတ်ကာ တနေကုန်ဖွင့်ထားသော (တနည်းအားဖြင့်) ကျွန်မတို့အား နားဒုက္ခပေးတတ်သော သီချင်းများကို ကြိမ်ဖန်များစွာကြားနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်...
ကျွန်မရံဖန်ရံခါ ဖေဖေနှင့် သဘောထားကွဲလွဲသော အချိန်များရှိသော်လည်း ကျွန်မဘ၀ရဲ့ အဓိက အရေးကြီးဆုံး နေ့စဉ်လည်ပတ်မှုများတွင် ကျွန်မ ဖေဖေနှင့် မေမေက မရှိမဖြစ်သာဖြစ်သည်... သူတို့ မြန်မာပြည် ခေတ္တပြန်သွားလျှင်ပင် အိမ်ပြန်လာတိုင်း ကြိုသူမရှိသောကြောင့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တံခါးဖွင့်ဝင်ရကာ တိတ်ဆိတ် မှောင်မဲနေသော အိမ်ထဲကို ၀င်ရတာပင် ကျွန်မအတွက် လစ်ဟာချက်တစ်ခုပင်... နေ့တိုင်း နားဒုက္ခမခံနိုင်၍ ငြူစူဖြစ်သော ဖေဖေ့၏ သီချင်းကြီး သီချင်းခံ အသံများမကြားတော့လဲ အိမ်ကြီးက ခြောက်သွေ့လွန်းလှသည်... နေ့တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့်ပတ်သတ်သော သတင်းများကို ဖွင့်မည့်သူမရှိတော့ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်တွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့် သတင်းများ အဆက်ပျက်ရသည်...
ဒီနေ့ဟာ ကျွန်မချစ်လှစွာသော ဖေဖေရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်တယ်... ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ အားကစားသိပ်မရှိတဲ့ ကျွန်မ ဖေဖေအတွက် ကျန်းမာရေးကို အနည်းနဲ့ အများလိုက်စားဖြစ်အောင် သူ့အတွက် Wii game စက်လေး မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်... စက်ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဂိမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ါသနာပါတတ်တဲ့ ဖေဖေ့အတွက် ကျန်းမာရေးအရလဲ လှုပ်ရှားဖြစ်အောင်တစ်ကြောင်း စင်္ကာပူရောက်ကာ ပျင်းနေသော ဖေဖေအတွက် အပျင်းပြေစရာ အသစ်တစ်ခုရသွားစေရန် ကျွန်မ စီစဉ်ဝယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်... နောက်တစ်ချက်ကတော့ အလုပ်က ပြန်လာတာနဲ့ အခန်းထဲဝင် ရတဲ့အချိန်ကို ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်တတ်တဲ့ ကျွန်မတို့တွေလဲ ဖေဖေနဲ့ အနည်းနဲ့ အများအချိန်တူတူသုံးကာ မိသားစုကြိုးပိုမိုခိုင်မြဲစေရန်ဖြစ်သည်... ဒါပေမဲ့ ခုဝယ်လာတဲ့ ဂိမ်းခွေက Mario sport Mix ထဲမှာ ကျွန်မထင်သလောက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားစရာသိပ်မလိုဘူးဖြစ်နေတယ်... လက်ထဲက wii remote လေး နည်းနည်းလှုပ်ရုံနဲ့တင်လုံလောက်နေတယ်... အဲဒါ ဘာဂိမ်းက ကောင်းလဲ သိရင် အကြံပေးသွားကြပါအုံး...
ဂိမ်းတွေကို အရမ်း စိတ်မ၀င်စားခဲ့တဲ့ ကျွန်မ ဒီနေ့ဝယ်လာပြီးမှ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်တော့ Wii က Function
အတော်လေးစုံသဗျို့.... လတ်တလော Wii Channels ပါပြီးသားတွေက Wii နဲ့ Nintendo GameCube games တွေ ကစားလို့ရတယ်... Mii channel ဆိုတာမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အကောင်ကို Customize လုပ်လို့ရတယ်... Photo Channel ဆိုတာမှာ SD card က ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကို တီဗွီမှာ တခါတည်းကြည့်လို့ရတယ်... အင်တာနက်နဲ့ ဆက်လိုက်ရင် Wii Shop Channel မှာ channel အသစ်တွေနဲ့ တခြားဟာတွေ Download လုပ်လုပ် ရှော့ပင်းပဲလုပ်လုပ်ရတယ်... Forecast Channel မှာ ကမ္ဘာအနှံ့က ရာသီဥတု အခြေအနေတွေကို ကြည့်လို့ရတယ်... News channel မှာ ကမ္ဘာအနှံ့က သတင်းတွေကြည့်လို့ရတယ်... function တွေကတော့ အများကြီးပဲ ဒါပေမဲ့ အကုန်တော့လုပ်မကြည့်ရသေးဘူး... သိပ်မလုပ်တတ်သေးတာလဲပါတယ်... သိတဲ့သူများ အကြံပေးသွားကြပါအုံး...
ဒါနဲ့ လိုရင်းကိုပြန်သွားရရင်... ဒီနှစ် ဖေဖေ့မွေးနေ့အတွက် သမီးစိတ်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပေးချင်တာကတော့ ဖေဖေ ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ ချစ်မေမေရယ် သမီးတွေရယ်နဲ့အတူ နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့...
Posted by mabaydar at 2:17 AM 10 comments :
Labels: အတုလ , ဗေဒါ့အကြောင်း
လက်ရှိ ရုံတင်ပြသနေတဲ့ Real Steel ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားရဲ့ နှလုံးအိမ်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် Dakota Goyo နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာလေးတွေကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်... ဒီဇာတ်ကားရဲ့ မင်းသားဟာ နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင် Hugh Jackman ဆိုသော်ညား ဒီဇာတ်ကားမှာ ကလေးငယ်ရဲ့ အဖေကို ရင့်ကျက်လာအောင် တွန်းအားပေးရတဲ့ အဓိကအခန်းက ပါဝင်နေရတာပါ... သူဟာ အရင်က အသံသရုပ်ဆောင်အဖြစ် ကလေးအစီအစဉ် "Arthur"... ဟိုတစ်လောက ရုံတင်သွားတဲ့ "Thor" ဇာတ်ကားမှာ Thor ငယ်ငယ်က ကလေးသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်... သူ၈နှစ်သားမှာ Resurrecting the Champ (၂၀၀၇)ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ Young Artist Award for Best Performance inaFeature Film - Young Actor Age Ten or Younger ဆုကို Nominated စာရင်းထဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်... သို့သော် ယခု Real Steel ကားမှာ အဧိက သရုပ်ဆောင် နေရာကို ပထမဆုံး ခုန်တက်သွားနိုင်ခဲ့တာပါ...
မေး။ ။ သားမှာ တီဗွီ အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ခုထက်ထိ သရုပ်ဆောင်လာသမျှထဲမှာ အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကောင်ရှိလား?
Goyo။ ။တကယ်တမ်းပြောရရင် ကျွန်တော် သရုပ်ဆောင်လာသမျှ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်လာသမျှ ဇာတ်ကောင်တွေအားလုံးကို ကြိုက်ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ခုကားမှာ Max က သူ့အဖေ ချားလီး(စ်) ကို ခပ်ရိုင်းရိုင်း စကားပြောတယ်... ဒါပေမဲ့ အဲဒါက တမျိုးတော် ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်... အပြင်မှာ ကျွန်တော့ အဖေနဲ့ အမေကို အဲလို ဘယ်တော့မှ ပြောမှာ မဟုတ်ဘူးလေ...
မေး။ ။ ချားလီး(စ်)က လူအရိပ်အခြေ နဲ့ အလိုက်မသိတတ်ဘူး... အဲလိုမျိုး ဇာတ်ကောင်မျိုးနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာ ဘယ်လို ခံစားရလဲ?
Goyo။ ။ တကယ်တော့ သူတို့ relationship မှာ Max ကတောင် အုပ်ထိန်းသူ (မိဘ) လိုဖြစ်နေတယ်... ချားလီး(စ်) က Max ကို ကလေးနေရာကနေ အဖေပုံစံရောက်အောင် လုပ်လိုက်တာ... သူ့အမေက သေသွားပြီ သူဟာ အရမ်းဝမ်းနည်းပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေမှာ အသိသာကြီး ဒါပေမဲ့ သူ့ အဖေကို သူပြန်ရလိုက်တယ်... အရင်က အဖေမပီသတဲ့ သူ့အဖေကို အဖေတစ်ယောက်လို ပြုမူနိုင်အောင် သူလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်...
မေး။ ။ သားမှာရော Max လို personality ရှိလား?
Goyo။ ။ လုံးဝပဲ... ကွန်ပြူတာနဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ စိတ်ဝင်စားတာကလွဲလို့ သူနဲ့တူတာ ဘာမှမရှိဘူး... ကျွန်တော်က PS3 ကစားရတာ အရမ်း ကြိုက်တယ်... UFC တို့ Call of Duty တို့ ကစားရတာ ကြိုက်တယ်...
မေး။ ။ စက်ရုပ်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတော့ ဘယ်လိုနေလဲ?
Gayo။ ။ စက်ရုပ်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အချိန်ကြာလာရင် သူတို့ဟာ တကယ့်လူတွေဖြစ်သွားတယ်... သူတို့မှာ personality ရှိတယ်... ခံစားချက်ရှိတယ် ဒီတော့ သူတို့နဲ့ အကြာကြီး အလုပ်လုပ်လိုက်ရင် သူတို့ဟာ တကယ်ဖြစ်သွားတယ်... နောက်ပြီး ကျွန်တော်က စက်ရုပ်တွေကို ချစ်တယ်... သူတို့နဲ့ အလုပ်တူတူလုပ်ရဖို့ဆိုတာ အရင်က တခါမှ မစဉ်းစားမိခဲ့ဖူးဘူး...
မေး။ ။ Rise of the Guardians ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားမှာ အသံ သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဘယ်လိုနေလဲ?
Goyo။ ။ အဲဒါက တကယ်ကြီးတဲ့ action ဇာတ်ကားပဲ Ewan McGreger နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ ကောင်းတယ်... သူက အတော်လေး ရီရတယ်...
မေး။ ။ ဒါဆို အဲဒိ နောက်ခံစကားပြောတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တုန်းက စတီဒီယိုထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းလား တခြားသူတွေနဲ့လား?
Goyo။ ။ ကျွန်တော် တွေ့ကြုံဖူးသမျှ အသံဖမ်း စတီဒီယိုတွေမှာတော့ ကျွန်တော် တစ်ယောက်ပဲပြောရတာပါ... ဇာတ်ကားအားလုံးပြီးသွားတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ချင်းပြောထားတာတွေကို ပေါင်းလိုက်တာ ကြည့်ရတော့ အရမ်းမိုက်တယ်...
မေး။ ။ Real Steel ဇာတ်ကား အောင်မြင်လာမယ်လို ထင်လား?
Goyo။ ။ သေချာတာကတော့ အဲဒိကားမှာ အားလုံးအတွက် တစ်ခုခုတော့ ပေးခဲ့ဖို့ ပါတယ်... အဲဒိကားက ကြည်နူးစေတယ်... ဒိအပြင် action - ထိုးနှက်မှု၊ အော်ဟစ်မှု၊ အငိုခန်း၊ ပျော်စရာအခန်း စတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေ ပြည့်နေတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်တယ်... သင်တို့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ခံစားချက်တွေ အပြည့်နဲ့ ကိုယ်တိုင် လက်ဝှေ့ထိုးနေရလိမ့်မယ်...
မေး။ ။ သားဒီကားကို ကြည့်တော့ နောက်ဘာလာမယ်ဆိုတာ သိနေတာတောင် စိတ်ထဲမှာ ခံစားပြီး ၀မ်းနည်းတာတွေ ရှိလား..?
Goyo။ ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စာရေးဆရာ John Gaden ရေးထားတာ ဒီထက်ကောင်းတာ မရှိလောက်တော့ပါဘူး... ကျွန်တော် ဒီကားကို ၅ ခါကြည့်ပြီးပြီ... ကြည့်တိုင် ကျွန်တော် အားမပေးတဲ့ မငိုတဲ့ မရီတဲ့ အခါမရှိပါဘူး... ဒီဇာတ်ကားရဲ့ မိနစ်တိုင်းကို ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်... ကျွန်တော့ သွေး၊ ချွေး၊ မျက်ရည်တွေက ဒီကားထဲမှာပါ... ကျွန်တော့အတွက်တော့ ဒါဟာ ကြီးမားတဲ့ ရလာဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့ကိုယ်ကျွန်တော်လဲ ဂုဏ်ယူပါတယ်...
မေး။ ။ အနာဂတ်မှာ ဘယ်လို ဇာတ်ကောင်စရိုက်မျိုးတွေ သရုပ်ဆောင်ချင်လဲ?
Goyo။ ။ ကျွန်တော်က 3:10 To Yuma လိုကားမျိုးကို ကြိုက်တယ် ပြီးတော့ Western Movies ကားမျိုးကို သရုပ်ဆောင်ချင်ပါတယ်... Western movies တွေသရုပ်ဆောင်ရတာ ပျော်စရာကောင်းမယ်ထင်တယ်... ဒါပေမဲ့ super hero ကားမျိုးတွေဆိုရင်လဲ မိုက်တာပဲ...
မေး။ ။ ဘယ် superhero ကို အကြိုက်ဆုံးလဲ?
Goyo။ ။ Marvel characters တွေ အကုန်လုံးကို ကြိုက်တယ်... အကြိုက်ဆုံးက ၂ယောက်ရှိတယ်... ဘယ်သူ့ကို ပိုကြိုက်လဲ ရွေးလို့မရဘူး... The Hulk ကို အရမ်းကြိုက်တယ်... အရမ်းကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားပဲ... The Hulk ကားတွေ အကုန်ကြည့်ပြီးပြီ... ပြီးတော့ Iron man, Iron man ကို အမြဲကြိုက်ခဲ့တာ...
မေး။ ။ ဒါဆို Jon Favreau (director of IRON MAN) နဲ့ အလုပ်တူတူလုပ်ချင်လား ?
Goyo။ ။ Iron Man! ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်တယ်... သူ ဒီကားကို ပြုလုပ်ရာမှာ အရမ်းတော်ခဲ့တယ်... နောက်ပြီး Cowboys and Aliens လဲ အရမ်းကောင်းတယ်... အဲဒိကားထဲက ဇာတ်ကောင်တွေလို သရုပ်ဆောင်ပြီး အရူးလိုလိုက်ပြောနေတာ အမေ့ကိုတောင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်... တစ်ချိန်လုံး အဲကားပဲ ကြည့်နေတာ...
မေး။ ။ တီဗွီအစီအစဉ်မှာရော ရုပ်ရှင်ရော လုပ်ဖူးသွားပြီဆိုတော့ ခု ရုပ်ရှင်မှာပဲ နေဖို့ စိတ်ကူးရှိလား?
Goyo။ ။ ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ရတာကို ခုပျော်နေတယ်... ရုပ်ရှင်တွေဆက်ရိုက်တာ ကျွန်တော့်အတွက် ကောင်းမယ်ထင်တယ်...
မေး။ ။ တစ်နေ့မှာ ဘယ်သူနဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်ဆုံးလဲ?
Goyo။ ။ ကျွန်တော် Spielberg နဲ့ အလုပ်တူတူလုပ်ချင်တယ် သူ့ကိုတစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပင်မဲ့လဲ သူ့ကောင်းကြောင်းတွေကြားတယ်... မဟုတ်ပဲတော့ လူတွေက ပြောမှာမဟုတ်ဘူး... သူက သဘောကောင်းတယ်လို့ကြားတယ်... သူနဲ့တွေ့ချင်တယ်...
Real Steel ရုပ်ရှင်ကားဟာ ခုရုံတင်ပြသနေပြီး Goyo ဟာ Personality ကောင်းပြီး Hollywood ခရီးကို အောင်မြင်စွာလှမ်းလျှောက်နေပါတယ်...
Posted by mabaydar at 5:49 PM4comments :
Labels: Celebrities , movie review
ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ကြော်ငြာတွေ့ကတည်းက ကြည့်ချင်ခဲ့တာပါ... ကြည့်ချင်ရတဲ့ အဓိက အချက်ကတော့ ၂ ချက်ရှိပါတယ်... ၁ ချက်က Hugh Jackman က မင်းသားဖြစ်တာ တစ်ကြောင်း... နောက် ၁ချက်ကတော့ ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ အဓိက ကလေးသရုပ်ဆောင်လေးတွေပါရင် ကျွန်မက သဘောကျပါတယ်... အထူးသဖြင့် သရုပ်ဆောင်ကလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းရင် ကြည့်ချင်ပါတယ်...
ဇာတ်လမ်းကတော့ ကြော်ငြာကြည့်ကတည်းက ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်... သို့သော် တကယ်သွားကြည့်လျှင်လဲ ပရိတ်သတ်ကို စိတ်မပျက်စေပါဘူး... ကျွန်မကတော့ သဘောကျပါတယ်... နောက်ဆုံးခန်းမှာဆို ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ် ကိုယ်ပါလိုက်ငိုနေမိသေးတယ်... (အသည်းငယ်တတ်လို့ပါ)...
၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ စက်ရုပ်တွေကို လူတွေအစား boxing ကစားခိုင်းပြီး လောင်းကစားလုပ်ကြတာ ခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်... ချားလီး(စ်) ဟာ ယခင်က လက်ဝှေ့သမားဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ခုအခါမှာတော့ တရားမ၀င် စက်ရုပ်လက်ဝှေ့ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်ရင်း အရှုံးတွေများကာ အကြွေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်... သူပိုင်တဲ့ Ambush ဆိုတဲ့ စက်ရုပ်ကြီးဟာ Ricky ဆိုတဲ့လူပိုင်တဲ့ Black Thunder ကျွဲနဲ့ ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရင် ရှုံးခဲ့လို့ အကြွေးတွေတင်တဲ့ အချိန်အတွင်းမှာပဲ သူ့ဆီကို သူ့ အရင် ရည်းစား ဆုံးပါးသွားကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်းခံရတဲ့အပြင် သူ့မှာ သူမထားခဲ့တဲ့ ၁၁နှစ်အရွယ် သားတစ်ယောက်အတွက် အုပ်ထိန်းခွင့်ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်... ထိုကလေးငယ်ကို သူ့အရင်ရည်းစားရဲ့ အစ်မဖြစ်သူ (ကလေးရဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူ)က မွေးစားချင်သဖြင့် အုပ်ထိန်းခွင့်ကို စွန့်လွှတ်ဖို့ လာရောက် အကြောင်းကြားတာဖြစ်ပါတယ်...
ရေဆာတုန်း ရေတွင်းထဲကျသလိုဖြစ်သွားတဲ့ ချားလီး(စ်)ဟာ... သူ့ သားကို ကြည့်တောင် မကြည့်ပဲ ဒေါ်လာ $100,000 ပေးရင် ပေးမယ်ဟု အဒေါ်ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ ညှိလိုက်ပါတယ်... သို့သော် သြဂုတ်လရောက်တဲ့အထိတော့ ကလေးကို သူက ခဏကြည့်ပေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်...
ထိုသို့ဖြင့် သူ၏သား Max နဲ့ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်... သူ့သားကလဲ သူ့ထက်ပင် ဂျစ်ကန်ကန် ခေါင်းမာတတ်ကာ ထက်မြတ်သော ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်... သူ့အဖေ သူ့ကို ငွေဖြင့်ရောင်းစားသည်ကိုလဲ ကောင်းစွာနားလည်သူဖြစ်ပါတယ်... သို့သော် အဖေတူသားပီပီ သူကလဲ ကွန်ပြူတာဂိမ်းနဲ့ စက်ရုပ်များကို ၀ါသနာထုံသူဖြစ်ပါတယ်... ချားလီး(စ်) ဟာ သူ့သား ရောင်းစားလို့ ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ တစ်ချိန်က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ စက်ရုပ် Noisy Boy ကို ၀ယ်ယူကာ ထပ်မံယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်း ထိန်းချုပ်မှု မကျွမ်းကျင်သောကြောင့် ထပ်မံဖြတ်ဆီးခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်...
ချာလီး(စ်)ဟာ သူ့သားနဲ့ သတ္တုတွေပစ်တဲ့ နေရာကို ခိုးဝင်ကာ အသုံးပြုလို့ရမဲ့ စက်ရုပ်အပိုင်းအစများကို ရှာဖွေဖို့ သွားခဲ့ပါတယ်... အဲဒိမှာ သူ့သား Max မတော်တဆ ချောက်ထဲပြုတ်အကျ ကမ်းပါးမှာ ထွက်နေတဲ့ စွန့်ပစ်ထားတဲ့ စက်ရုပ်ရဲ့လက်နဲ့ ငြိပြီး အသက်ချမ်းသာခဲ့ပါတယ်... Max ဟာ မြေကြီးတွေကိုဖယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ATOM ဆိုတဲ့ စက်ရုပ်ကို ရှာတွေ့ပြီး သူ့အသက်ကို ကယ်တဲ့ စက်ရုပ်ကို ယူလာချင်ပါတယ်... ချာလီး(စ်)က သဘောမတူသော်လည်း သူ့အားသူကိုးကာ ဇွတ်ယူလာခဲ့ပါတယ်... ဒီအခါမှာတော့ ချာလီး(စ်) Max နဲ့ စက်ရုပ် ATOM တို့ရဲ့ ဂန္ဒ၀င်ခရီးလမ်း အောင်ပွဲတွေစတင်လာတဲ့အပြင်.... အဖေနဲ့ သားရဲ့ သံယောဇဉ် နားလည်မှု ဂရုစိုက်မှု တူညီမှုတွေလဲ စတင်လာပါတော့တယ်... ချားလီး(စ်)တစ်ယောက် သူ့သား Max ရဲ့ လိုအင်ကို ဖြည့်စည်းပေးနိုင်ပါ့မလား... Max ကရော သူ့အဖေကို ချစ်သလား မုန်းသလား... ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာရှူစားကြပါရှင်... အောက်က ဝေဖန်ရေးမှာတော့ spoiler တွေပါတဲ့အတွက် spoiler alert အောက်ပိုင်းကို မကြိုက်လျှင် ဆက်မဖတ်ကြစေရန်....
မဗေဒါ ရေးပြီဆိုကတည်းကတော့ မဗေဒါကြိုက်တဲ့ ကားမို့ဆိုတာ သိသာပါတယ်... မဗေဒါကြည့်ချင်တဲ့ Hugh Jackman ကို အပိုစာလား ၀တ်စုံတွေ မပါပဲ သာမာန်ပုံ ကြည့်ရတယ်... ကလေးလေးကလည်း မဗေဒါထင်တာထက်ချစ်စရာကောင်းပြီး စတိုင်မိုက်သလို သရုပ်ဆောင်ကလည်း superb ပဲ... (အဲလို ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သားလေးလိုချင်တယ်)... အစက Hugh Jackman ကြည့်ချင်လို့သွားတာ ပြန်လာတော့ အဲဒိကလေးကို အသဲစွဲသွားတယ်...
Animation တွေကကောင်းတော့ တကယ့်လူနဲ့ စက်ရုပ်တွေကို ရိုက်တဲ့အတိုင်းပဲ... ဘယ်လိုလုပ်လဲ အကြမ်းဖျင်း သိချင်လို့ ရှာကြည့်လိုက်တော့... Animatronics ဆိုတဲ့ နည်းကို အသုံးပြုပြီးရိုက်သတဲ့... ရှင်းပြရင် လိုရင်းပျောက်မှာဆိုးလို့... ဒိထက်သိချင်ရင် Google လိုက်နော်... မဗေဒါလဲ ရှင်းပြရလောက်အောင် မသိလို့... လူတွေ လက်ဝှေ့ထိုးတဲ့ကားကြည့်ရင် ရင်မောရလွန်းလို့ ခုတော့ စက်ရုပ်တွေထိုးတာဆိုတော့ နည်းနည်းဖြေသာသေးတယ်... အဲဒိစနစ်အပြင်မှာထွင်လိုက်လဲကောင်းတာပဲ...
ဒီလိုကားမျိုးဟာ နောက်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကို မှန်းလို့ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးပါ... အဆုံးဘယ်လိုသတ်မလဲဆိုတာလဲ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်... သို့သော် ဒီကားဟာ သားအဖ ၂ယောက်ကြား သံယောဇဉ်က ရင်ကိုအေးမြစေပြီး အကြမ်း အလွမ်း ဟာသ လှုပ်ရှားမှု စိတ်ခံစားမှု စတာတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်....
ဒီကားမှာ Hugh Jackman ရဲ့ ဇာတ်ကောင် ချားလီး(စ်)ဟာ တာဝန်မယူတတ်တဲ့ တဇွတ်ထိုးသမား သူ့အတွက်ပဲ သူကြည့်ကာ ဖခင်ကောင်းမပီသသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်... သို့သော် သူ့ကိုအနားမှာ နားလည်ပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်... သူ့သားလေးဟာ သူ့ထက်ငယ်ပင်မဲ့ သူ့ထက်ရင့်ကျက်တယ်လို့ ကျွန်မမြင်တယ်... ဘယ်ဟာ လုပ်သင့်တယ် မလုပ်သင့်ဖူးဆိုတာကို အခြေအနေကြည့်တတ်တယ်... ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်...သူ့အဖေက သူနဲ့နေရင် ဘ၀အတွက်မကောင်းလို့ သူ့အဒေါ်တွေနောက်ထည့်တော့ သူ့မှာ စက်ရုပ် ချန်ပီယံ Zeus နဲ့ စိန်ခေါ်ထားတဲ့ ပွဲကို ပြိုင်ချင်လို့ မလိုက်ချင်ပင်မဲ့ သူလိုက်သွားခဲ့တယ်... နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ သူဟာ သူ့အဖေကို ခွင့်လွှတ်ပြီး သူ့အဖေ ထူးချွန်ထက်မြတ်တာကို ဂုဏ်ယူတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်...
နောက်ဆုံးခန်းမှာ သူ့အဖေက စက်ရုပ်ကို Shadow detection mode ကို ပြောင်းပြီး သူထိုးတဲ့ပုံအတိုင်းလိုက်ထိုးတဲ့ အခန်းမှာ... သူ့သားလေးက သူ့အဖေကိုကြည့်ပြီး ဂုဏ်ယူ ၀မ်းသာတဲ့ မျက်ရည်ကျတဲ့ အခန်းမှာ ကျွန်မတော်တော်လေး heart ထိလို့ လိုက်ငိုမိသေးတယ်... သူ့သားဟာ သူ့အဖေကို နားလည်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ပြပါတယ်... ဒီဇာတ်လမ်းအသိမ်းမှာ သားအဖ ၂ယောက် အတူတူနေမလား... သူ့ကို မွေးစားထားတဲ့ အဒေါ်လင်မယားနဲ့ပဲနေမလားဆိုတာကတော့ ဒွိဟပွားစရာပါ... ရုပ်ရှင်သဘောအရ သားအဖ ၂ယောက်တူတူနေတယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားနိုင်သလို (အရင်ခေတ်က ရုပ်ရှင်ကားများ ပုံစံ)... reality အတိုင်း သူ့သားက သူ့မွေးစားမိဘ သူ့အဒေါ်တွေနဲ့ပဲနေတယ်ဆိုပြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.... spoiler ပြောရရင်တော့ ကလေးက သူ့အဒေါ်တွေနဲ့ပဲနေရမှာပါ... ဒါဟာလဲ ကျွန်မစိတ်ထင်တော့ ကလေးအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုပါ... အဖေနဲ့တူတူမနေရလို့ စိတ်မကောင်းသလိုဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့... သူ့အဒေါ်ကလဲ ကလေးကို ချစ်ရှာပါတယ်... တိုးတက်ဖို့လမ်းရှိပါတယ်...
ဒါနဲ့ အဲဒိကားထဲက Max အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သွားတဲ့ ကလေးလေးရဲ့ နာမည်ကတော့ Dakota Goyo လို့ခေါ်ပါတယ်... (Dakota Funning ရဲ့မောင်မဟုတ်ပါဘူး) သူ့ကို စက်ရုပ်နဲ့ တူတူ ကတဲ့ အခန်းတွေမှာ ဒီကလေးလေး တော်တော် cool ဖြစ်တယ်လို့ တွေးမိတယ်... ကြီးလာရင်တော့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်တော့မယ်လို့ ထင်တာပဲ... ကြီးလာရင်လဲ မင်းသားဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်... ဒီကလေးဟာ သူ၈နှစ်သားမှာ Resurrecting the Champ (၂၀၀၇)ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ Young Artist Award for Best Performance inaFeature Film - Young Actor Age Ten or Younger ဆုကို Nominated စာရင်းထဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်... အဲဒိကားရှာကြည့်အုံးမယ်...
Hugh Jackman နဲ့ Dakota Goyo ကို ဒီကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အင်တာဗျူးထားတာကို နောက်ပိုစ့်နဲ့ ဆက်လက်ဖော်ပြပါအုံးမယ်...
Posted by mabaydar at 4:35 PM3comments :
ကိုယ့်လက်သည်းလေးပေါ်မှာ shooting Star ပုံလှလှလေး ဆိုးကြရအောင်...
ပထမဆုံး လက်သည်းမပျက်စီးအောင် နဲ့ လက်သည်းနီကြာရှည်ခံစေရန် Base coat အောက်ခံ လက်သည်းဆိုးဆေးကို ဆိုးပါ....
ဒုတိယအနေနဲ့... ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အောက်ခံ အရောင်ကို ဆိုးပါ... အဖြူ သို့မဟုတ် အမဲ သို့မဟုတ် ကောင်းကင်ပြာရောင်လေးတွေဆိုရင် လိုက်ဖက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်... ကျွန်မကတော့ အပေါ်မှာ ရွှေရောင်ဆိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အနက်ရောက်ကို အောက်ခံထားလိုက်ပါတယ်... ခြောက်တဲ့အထိ ခေတ္တစောင့်ပါ...
ပြီးလျှင် အပေါ်မှ ရွှေရောင်အလက် သို့မဟုတ် ငွေရောင် အလက် ကို လက်သည်းကို ဖြတ်ပြီး ကြယ်ကြွေနေတဲ့ လမ်းကြောင်းပုံအတိုင်းဆိုးပါ... အဖြူအခံဆိုးထားတဲ့သူများအတွက် အပြာရောင် သို့ ပန်းရောင်စတဲ့ ထင်ပေါ်မဲ့အရောင်များကို သုံးနိုင်ပါတယ်... ကြယ်ကြွေလမ်းကြောင်းကို အပြင်ဘက် (outward) သို့မဟုတ် အတွင်းဘက် (inward) ကိုယ် လွယ်ကူမယ်ထင်သလို ဆိုးလို့ရပါတယ်... မဗေဒါက အပြင်ဘက်ထွက်တာကို လက်သန်လို့ အဲလိုပဲဆိုးလိုက်ပါတယ်...
မှတ်ချက်။ ။ ထိုသို့ ဆိုးဖို့အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဆိုးတံသေးသေးလေးပါတဲ့ stripper nail art polish ကိုသုံးရပါတယ်... အဲဒိ stripper တွေက ရိုးရိုးလက်သည်းနီတွေထက် ဈေးအနည်းငယ်ကြီးပင်မဲ့ nail art ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပျိုပျိုမေတို့အတွက် အလွန် အသုံးဝင်တဲ့အတွက် အခြေခံ ကိုယ်လိုအပ်မဲ့ထင်တဲ့အရောင်ကို ယ်ကာတခြားအရောင်များအောက်ခံထားပြီးဆိုးနိုင်ပါတယ်...ကျွန်မကတော့ ရွှေရောင်၊ ငွေရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင်လေးကို ၀ယ်ထားပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ခုတော့ အခြေခံရောင်ဖြစ်တဲ့ အဖြူနဲ့အနက်ကိုလဲ ထပ်ဝယ်ဖို့လိုနေပြီထင်ပါတယ်... မဗေဒါဆိုးထားတာ ကြယ်ကြွေတဲ့ လမ်းကြောင်းက အရမ်းကြီးပြီး သိပ်မလှဖူးဖြစ်နေပါတယ်... လောဘကြီးပြီး မပေါ်မှာစိုးလို့ ဆိုးလိုက်တာ အရမ်းများသွားပါတယ်.. ထိုသို့မဖြစ်အောင် သင်ခန်းစာယူပါလေ... :P
ဟောဒီလို brush သေးသေးလေးပါတဲ့ လက်သည်းနီနဲ့ ဟောဒီလို ကြယ်ကြွေလမ်းကြောင်းကို ဆွဲပါ.. မဗေဒါဆွဲသလို လမ်းကြောင်း သိပ်မကြီးသွားစေရန် သတိပြုပါ...
နောက်ဆုံး အဆင့်အနေနဲ့ မဗေဒါမှာ အသင့်ရှိပြီးသား ကြယ်လေးတွေပါတဲ့ လက်သည်းနီကနေ သွားကြားထိုးတံလေးနဲ့ ကြယ်တစ်လုံးစီကို ယူပြီး ကြယ်ကြွေလမ်းကြောင်းရဲ့ ထိပ်နားလေးမှာ တင်လိုက်ပါတယ်...
ကြယ်လေးတင်ပြီးသွားပြီ သိပ်တော့ မမြင်ရသလိုပဲ...
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အားလုံးခြောက်သွားပြီဆိုလျှင် ပြောင်လက်သွားစေရန်၊ ၃မျိုးလုံး ပူပေါင်းသွားဝေရန်နှင့် ဆိုးထားသောလက်သည်းများ ကြာရှည်ခံစေရန်၊ ပဲ့ထွက်ခြင်းလျော့နည်းစေရန် ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ Top Coat ကို ထပ်ဆိုးပါတယ်... ဒါဆိုရင်တော့ Shooting Star လက်သည်းအနုပညာပြီးဆုံးပါပြီ... အားလုံး လက်သည်းမှာ ကြယ်ပွင့်နိုင်ကြပါစေနော်....
ကုန်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့ မဗေဒါရဲ့ လက်သည်းနီ collection ပါ... I like it
Posted by mabaydar at 5:32 PM5comments :
Posted by mabaydar at 4:44 PM 1 comment :